smartwatch kacha mma dị ọnụ ala nke Mee 2022 | Androidsis
Smartwatches kachasị ọnụ ala
Septemba dị ka "afọ ọhụrụ" nke abụọ, ohere nke abụọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na njedebe nke afọ nke anyị na-eweta ihe ịma aka na nkwa ọhụrụ. Ozugbo anyị mechara oge ezumike, ụfọdụ gara aga na ndị ọzọ mgbe anyị gachara, anyị niile ga-alaghachi n'usoro nke ụbọchị, ọmụmụ, ọrụ, ọrụ ezinụlọ na ọbụlagodi otu oge, yabụ na ọ dịghị ewute gị kama ịnwa gbaa anyị ume ma ọ bụ jiri obi ụtọ na-eme onwe anyị obi ụtọ nke ga-enyere anyị aka iji ọkwa dị mma chee ọhụụ ọhụụ ọhụụ. You na-eche ịnwa otu esi ebi na smartwatch na nkwojiaka gị? Ọ dị mma ugbu a bụ oge dị mma iji debanye aha maka ahụmịhe a n'ihi na ịnwekwara ike inweta ha ọnụ ala karịa oge ndị ọzọ n'afọ.
Oge a bụ “Septemba Septemba” bụ oge dị mma ịhapụ igwe smartwatch mbụ gị ma ọ bụ iji megharịa nke ị nwere wee megharịa ya na ụdị ọhụụ, iji atụmatụ kacha mma na mma mara mma. Mgbe ezumike ezumike, onyinye ahụ na-amụba ma ị nwere ike iji oge ahụ nweta ngwaọrụ weararable ọhụrụ gị na ọnụahịa kachasị mma, ọkachasị tupu ezumike ezumike ekeresimesi na ọnụ ahịa amalite ibili n'ụzọ ọfụma. Maka ndị chọrọ ịnwale ahụmịhe elekere anya, ma ọ bụ naanị iji dochie nke ha nwere na nke ọhụrụ na-emebi emebi akpa ha, taa na Androidsis anyị na-atụ aro ndepụta na ụfọdụ nke kacha mma ọnụ ala smartwatch Site na ahịa.
1 A smartwatch maka gịnị?
2 Smartwatches kachasị ọnụ ala nke oge ahụ
2.1 Obere Oge Obere
2.2 Obere oge
2.4 Uwe ejiji KW88
2.6 Sony Smartwatch 3 Egwuregwu
2.7 Obere Oge Obere
A smartwatch maka gịnị?
Nke a bụ nnukwu ajụjụ ị kwesịrị ịjụ onwe gị tupu ịmalite ịmalite ịzụta igwe elekere na maka nke, ị kwesịrị chọta azịza doro anya na nke ziri ezi Ma ọ bụ ọzọ, ahụmịhe gị nwere ike ọ gaghị eju afọ dịka ọ na-egosi n'ihu ndị protagonists nke mgbasa ozi.
Mgbe anyị na-ekwu maka nche ese anyị na-ekwu maka ya weara ngwaọrụ ma ọ bụ ihe ejiji, na ụdị a enwere isi ụdị abụọ, smartwatches na smartbands, na nhọrọ n'etiti otu ma ọ bụ nke ọzọ ga-adabere n'ụzọ bụ isi ị ga-enye ya, kamakwa n'ihe masịrị gị.
Ihe dị iche n'etiti ụdị ngwa ndị a na-eyiri eyi dị na ngwa ma ọ bụ ọ bụghị iji mezuo ngwa: ọ bụ ezie a smartwatch nwere ike ịmalite ma na-agba ọsọ ngwa site n'onwe ya (dị ka ama na-eme), smartband nwere ọtụtụ njirimara ọkọlọtọ, na-enweghị ohere ọ bụla na n'ime ha ị nwere ike iwunye na / ma ọ bụ mee ngwa.
Ozugbo emechara ka nghọta dị mkpa a pụta ìhè, anyị na-abanye n’ọrụ gbasara ọrụ, “kedu maka” nke anyị kpọtụrụ aha na mbụ. Ma smartwatches na smartbands nwere nke doro anya na-abịakwute njikwa na nlekota nke ahụike na ọrụ ahụ, na kwa na ma ị nwere ike nata ozi (ịdọ aka ná ntị nke oku ma ọ bụ ozi, ọkwa kalenda, wdg) n'agbanyeghị, ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ka ị na-emekọrịta site na ngwaọrụ n'onwe ya (dịka ọmụmaatụ, zaghachi ozi natara, jikwaa egwu egwu, wdg), mgbe ahụ ị ga-emerịrị ịhọrọ smartwatch nke nwekwara nchekwa dị n'ime ya ga-enye gị ohere ịchekwa egwu iji gee egwu n'oge ọ bụla, ebe ọ bụla. N’aka ozo, oburu n’izugbe na i “ghafere” amuma na ihe ichoro bu ihe nwere ezi uche ma di nma nke g’eji ghota ukwu gi, kalori ndi burned kpochapuru, obi gi, uzo gara njem, wdg. dụọ gị ọdụ ka ị gaa maka smartband ma ọ bụ quantifying mgbaaka.
Ozugbo ị doro anya na ịchọrọ ịchịkwa mmega ahụ gị ma nata ọkwa, gee egwu na ọrụ ndị ọzọ, oge eruola ka inyocha ụfọdụ smartwatches kachasị ọnụ ala.
Smartwatches kachasị ọnụ ala nke oge ahụ
Nke nke kacha mma China smartwatch ma ọ bụ smart ese ama fọrọ nke nta ka iche iche dị ka nke smartphones. Mgbe ị na-achọ smartwatch nke kachasị mma maka mkpa gị na akpa gị, ị ga-ahụ a dịgasị iche iche nke nhọrọ, site na atụmatụ nke efu efu ole na ole euro, na elekere nke narị ise na narị isii na ndị ọzọ. Otú ọ dị, taa anyị ga-ele anya na akụkụ nke ala nke tebụl ọnụahịa ma anyị ga-elekwasị anya n'igosi gị ụfọdụ smartwatches kachasị ọnụ ala nke dị taa. Ihe kpatara nke a dị mfe: n'eziokwu, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ na-elekwasị anya na ọrụ dịka Nlekọta nke mmega ahụ na nnata nke ọkwa dị iche iche, na maka nke a, eziokwu bụ na ọ dịghị mkpa ịnọrọ na akpa efu. Ka anyị lelee ụfọdụ n'ime nhọrọ ndị a.
Obere Oge Obere
Ọ bụ ezie na Pebble bụ ụlọ ọrụ "na mkpochapu", ọ bụrụ na ịchọrọ smartwatch dị ọnụ ala ma dị elu, nke a Obere Oge Obere Ọ kwesịrị ịbụ otu n'ime nhọrọ mbụ gị. Na a okirikiri imewe, mara mma dika hel ma inwere ya ihe na-erughị otu narị euro.
El Obere Oge Obere agwakọta kpochapụwo imewe na oge a na ọrụ, na ọ dị ezigbo gịrịgịrị ma na-enwu (7,5 mm n’ịdị arọ na gram 28). Na ya ị nwere ike nyochaa ọrụ ahụ gị niile ma nata ọkwa na ya LCD Ikanam backlight ihuenyo na mmemmem ikiri. Ọ gụnyekwara 0,164 GB nke Ram, ọ bụ mmiri na-enweghị mmiri ma ị nwere ike iji ya iPhone na gam akporo ekwentị gị.
Ogwu Ọ bụ akara dị oke egwu, nke ndị ọrụ ya hụrụ n'anya ma jiri ya kpọrọ ihe, yabụ ọnụnọ ya dị na ndepụta a nke smartwatches dị ọnụ ala, mana ọ bụghị ndị nwere onyinye, ekwesịghị ịbụ ihe ijuanya. Mgbe agwa gị banyere Obere Oge Obere, M na-egosi na ị ọzọ ọbụna dị ọnụ ala karịa nlereanya. Ọ gbasara Obere oge, a smartwatch nke ị nwere ike inweta naanị euro iri isii, dakọtara na iPhone na gam akporo, e-Paper 1,25-inch, ARM Cortex-M3, 128MB RAM, mmiri na-egbochi mmiri, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Mgbe ụfọdụ ọ bụla myirịta na eziokwu bụ kpere coincidental ma NO, nke a abụghị ikpe, m n'aka. N'ebe ọwụwa anyanwụ LEMFO LF07 ihe anyị ga-enweta na Amazon ihe na-erughị euro iri asatọ Ọ bụ ihe doro anya nke Apple Watch design, ya mere, ọ zuru oke maka ndị na-achọ atụmatụ nke Apple Watch, mana ha adịghị njikere ịkwụ ụgwọ ọ na-efu. Ee ee, ọ dịkwa mma maka ezigbo “ọnọdụ”.
Dịka anyị pụrụ ịhụ, ọ bụ ọmarịcha smartwatch, nke emere nke aluminom na eriri silicone, bọtịnụ akụkụ na okpueze dijitalụ. O nwere ihuenyo IPS 1,54 ″, batrị 320 mAh, 128 MB nke RAM, Bluetooth 4.0 wee gụnye Oghere kaadị SIM yabụ ị ga - ejikọ mgbe niile, ọbụlagodi na ama gị adịghị nso. Ke adianade do, ọ bụ dakọtara na ma iOS na gam akporo.
Uwe ejiji KW88
Anyị ga-ebuli obere ego na-eru nso na euro 130 nke a Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. na ị nwere ike ịchọta ihe anọ agwụla na nke kachasị mma ya nwere na ọ nwere mobile Njikọta yabụ ị nwere ike ịga n'ihu na-eji ya ọbụlagodi ma ị hapụ ekwentị gị n'ụlọ.
Iri naanị gram 77, na-egosipụta ụdị egwuregwu, nke okirikiri, nke ekike KW88 na-enye a AMOLED ihuenyo Nhazi nhazi 1,39 MTK6580 1,3 GHz, 512 MB Ram, 4 GB nke nchekwa n'ime, GPS, ihe mmetụta obi, Wi-Fi na 3G njikọta, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọzọkwa, ọ bụ dakọtara na iPhone na gam akporo.
Branddị Zeaplus adịghị ada "ma ọ bụ dị ka Tato" agbanyeghị, nke bụ eziokwu bụ na ọ nweela ike ịnye ezigbo smartwatch nhọrọ, ọkachasị maka uru ọ bara maka ego. Na DM360 Zeaplus Egwuregwu ... sonso gafere iri ise euro ọnụahịa ma ọ na-enye anyị smartwatch na-eri naanị 56 gram, waterproof, na Bluetooth 4.0, dakọtara na iPhone na gam akporo, batrị 320 mAh, Mediatek processor na 128 MB nke RAM na 1,22 IPS touch screen., XNUMX sentimita asatọ.
Iji Zeaplus DM360 a ị nwere ike chịkwaa mmega ahụ gị niile, gụnyere ụda obi gị na usoro ihi ụra gị, mana ị nwekwara ike enweta alerti, ificationsma Ọkwa, kpọọ music na ọbụna iji ya dị ka a ime akara ịse foto. Ọ bụrụ n'ịhọrọ ụdị kpochapụwo, yana ọzọ, ọ bụ ụzọ izizi gị na ngalaba smartwatch, Zeaplus DM360 bụ nhọrọ dị mma ma dịkwa ọnụ ala iji bido.
Sony Smartwatch 3 Egwuregwu
Anyị na-amali elu kwupụta a ukwuu prestigious ụlọ ọrụ na-egosi gị nke a Sony Smartwatch 3 Egwuregwu nke, aesthetically dịkarịa ala, m hụrụ n'anya. Maka ihe karịrị otu narị euro anyị nwere ike inwe egwuregwu egwuregwu smart watch na ihuenyo 1,6-anụ ọhịa, quad-core processor, 512 MB Ram, 4 GB nke nchekwa n'ime, 420 mAh batrị na-ekwe nkwa ruo ụbọchị abụọ nke "iji ya eme ihe", ụdị dịgasị iche iche na-agbanwe agbanwe, na-eguzogide mmiri na sistemụ arụmọrụ Android Wear.
M dọrọ gị aka ná ntị na mbido, na Pebble ga-anọ na ndepụta a ọtụtụ oge, ọ bụkwa. N'ezie, anyị na-akwụsị dị ka anyị malitere, na otu nke ya ụdị, na nke a, na Obere Oge Obere, a smartwatch nke anyị nwere ike ịnweta na oji, ọlaọcha ma ọ bụ ọla edo mechara maka ihe na-erughị otu narị euro na nke ahụ na-enyekarị njirimara ndị ahụ dịka ụdị "Oge" nke m gosiri gị n'elu, belụsọ na nke a bụ ejiri igwe mee ya na-eme ka ọ na-eguzogide ọgwụ.
Na olee otu mmechiCheta na nke a bụ naanị obere nkọwa smartwatches kachasị ọnụ ala n'ihi na eziokwu bụ na n'oge a a na-enye onyinye dị nnukwu ma dị iche iche, na mma na ọnụahịa. N'ezie, enwere ọtụtụ nhọrọ dị ọnụ ala karịa, n'eziokwu, enwere elekere anya maka ihe karịrị euro iri abụọ (yana ọbụlagodi), agbanyeghị, anyị anaghị adụ ha ọdụ n'ihi na ahụmịhe ahụ nwere ike iwe iwe yana tpco na-enyekwa elele dị ọnụ ala na-enweghị n'ihu bulie. N'ọnọdụ ọ bụla, ndepụta a dị mkpirikpi nwere ike ịbụ mmalite mmalite maka ndị nke ị na-ekwenyeghi na ịchọrọ smartwatch, mana n'otu oge ahụ ịchọrọ gbalịa n’etinyeghị nnukwu ego na ahụmịhe.
Ma gị? Have nwere ọnụ ala smartwatch na obere maara onye ị na-enchanted na gịnị ka ị ga-akwado anyị? Jirizie ohere maka nkọwa dị n'okpuru wee gwa anyị atụmatụ gị na ebe ị ga-enweta ya.
Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ smartwatch ka mma, echefula nhọrọ anyị nke kacha mma smartwatch.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Smartwatches kachasị ọnụ ala
OnePlus chọrọ imeziwanye ndị ahịa ya
Comio, onye ọzọ na-emepụta ama ama China nke na-ebupụta n'ahịa ndị India